Al-Shabaab oo saraakiil sar sare looga qaarijiyay howlgal ka d... | Universal Somali TV
Al-Shabaab oo saraakiil sar sare looga qaarijiyay howlgal ka dhacay Hiiraan iyo Jubada Hoose
Maleeshiyaad ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal si wadajir ah ay iskaga kaashadeen ciidanka xooga dalka iyo kuwa Jubbaland oo ka dhacay degaanka Bandar-Jadiid.
Taliyaha ciidanka xooga Jenaraal Odawaa yuusuf Raage oo la hadlay wakaalada wararka dowlada ayaa sheegay in 15 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dilay howlgalkaan isaga oo intaa raaciyay in mid ka mid ah ay ciidanka nolosha ku Hayaan.
Dhanka kale wuxuu tilmaamay in wadada xiriirisa Jalalaqsi iyo Buulaburte ay ciidanka xooga ku dileen sargaal lagu sheegay Xasan Yare oo ahaa madaxii miinooyinka Al-Shabaab iyo Ibraahim Cabdi Turceey oo ahaa hogaamiyaha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan.
Dowlada ayaa ku dhawaaqday howlgalo ururka Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay ka joogaan dalka waxaana bilihii la soo dhaafay milatariga ay ku guuleesteen deegaano ay ku sugnaayeen maleeshiyada Kooxdaan.
Kan-xigaAsxaabta Mucaaradka oo eedeyn kulul u...
Kan-horeQaramada midoobay oo ka digtay xasuuq...
53,450,900 unique visits